Ameerikaan waraana narratti labsite jechuun Kooriyaan Kaabaa himatte - BBC News Afaan Oromoo
Ameerikaan waraana narratti labsite jechuun Kooriyaan Kaabaa himatte
26 Fuulbana 2017
Goodayyaa suuraa Haguma Kooriyaan Kaabaa yaalii meeshaa waraanaa taasistu qoqqoobbiin faanuma hordofa, garuu hin dhorkine
Prezidaantiin Ameerikaa Donaald Traamp waraana nurratti labse kan jedhan ministirri dhimmi alaa Kooriyaa Kaabaa Piyoongyaang mirga xiyyaarawwan Ameerikaa boombii nurratti roobsuufi jedhan rukutuuf mirga qabna jedhan.
Rii Yong-hoo akka jedhanitti osoo xiyyaaraawwan waraanaa Ameerikaa daangaa qilleensaa Kooriyaa Kaabaa ala ta'eyyuu baatee ni rukutu.
Waayit Hawuus garuu dubbiin kuni 'waan hin fakkaanne' jedhe. Pentaagoon qoosaa dubbii isaanii akka dhiistu akeekkachiisaniiru.
Dubbii himaan mootummoota gamtoomani dubbiin irra irra keessa dubbatan waan hin taanetti nama geessa jechuun yaaddoo qaban himan.
Dubbiin obbo Ri isa pireezidaant Traamp yoo hoggansi Kooriyaa Kaabaa akkanaan haasa'uu itti fufan 'hammana waan turan miti' isa jedhanif deebii kennuufi.
''Hunda dura Ameerikaan dursite lola nurratti labsuu ishii addunyaan marti hubachuu qaba'' jedhaniiru ministirri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa yaa'ii walii galaa mootummoota gamtoomaniitti Sambata darbe erga dubbatani booda yeroo gaazexeessitootatti himan.
Ameerikaan lammiileen Kooriyaa Kaabaa biyyatti akka hin seenne uggurte
''Tarkaanfi nutti dhufu qollifachuuf mirga guutuu qabna. Kuni egaa xiyyaarota Ameerikaa boombii roobsan osoo dhuma daangaa qilleensaa Ameerikaa keessa jiraachuu baataniyyuu jechuu dha.''
Pirezidaant Traamp dubbii ministirrii dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa obbo Fri Niw Yoorkitti dubbatan booda twittarii irratti barreessanin ''namicha abba irree dubbii bitaa mirga ilaaluu hin dandeeye,'' fi ''ergama of balleessurra,' jiru jedhani ture.
Dubbii himtuun Pentaagon colonel Robart Maniing deebii kennanin: ''Kooriyaan Kaabaa qoosaa keenya yoo dhaabuu baatte, hin beektu, dhimma biyyatti waliin qabnu furuuf pireezidaantichaaf yaada dhiyeessina.''
Goodayyaa suuraa Ameerikaa qolachuuf daangaa qilleensaa alattuu lolla jedhan ministirri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa, Rii Yong-hoo
Waraanni ololaa torban muraasaaf biyyoota lamaan kana gidduu itti fufuus, waan lolatti seenan hin fakkaatu jedhu xinxaltoonni.
Kooriyaan Kaabaa yaalii balistikii niwkilaraa fi misaa'elaa walitti aansuun yeroo taasistu, mootummoonni gamtoomani immoo qoqqoobbii irra kaa'uun ni yaadatama.
Qondaaltonni Kooriyaa Kaabaa meeshaa waraanaa niwkilaraa qabaachuun addunyaa isaan balleessuuf gamu kan itti qolatan akka ta'e himu.
Yaalii niwkilaraa dhiyeenya Kooriyaan Kaabaa taasiste hordofe manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomani qoqqoobbii haaraa irra kaa'uun ni yaadatama.